Izidakamizwa "prednisolone wamafutha" - izinkomba ukusetshenziswa
Izidakamizwa "prednisolone wamafutha" libhekisela ejenti esithinta wendawo anti-iguliswa, eqeda ukuvuvukala, antiekssudativnoe senzo. Lokhu ekwakhiweni okumele asetshenziswe kuphela kadokotela, kusukela kudala imiphumela emibi.
"Wamafutha Prednisolone" - yokusetshenziswa
Ukulungiselela "prednisolone" ikhishwa ngesimo yokugcoba noma ngesimo komjovo isixazululo, ithebhulethi, ngakho-ke inikezwa abadinga imishanguzo ye letindzala zezinzwa izifo izicubu, kanye ukucinana kwemigudu yokuphefumula, vasculitis letindzala, isifuba somoya, isimo asthmaticus, isifo sesibindi futhi izilonda emathunjini . Esimisiwe 'Prednisolone "futhi khona syndrome nephrotic, nesifo, peripheral anobuthi, enteritis, polyneuritis, adrenogenital syndrome, kanye ne-hepatitis sokuhlasela kwamasosha omzimba, mzimba anaemia hemolytic, glomerulonephritis, futhi isifo Addison sika.
Umuthi 'prednisolone wamafutha "lisetshenziswa ekwelapheni urticaria, atopic dermatitis, neurodermatitis ehlasela umzimba wonke, ulele elula okungamahlalakhona, eczema, dermatitis seborrheic, discoid lupus erythematosus. Libuye ngempumelelo ekwelapheni dermatitis elula nomzimba, izidakamizwa yokusabela, psoriasis erythrodermic, Alopecia, epicondylitis, tenosynovitis, bursitis, ehlombe esintamo, keloids, sciatica.
Izifo lapho izidakamizwa azenziwanga "Prednisolone"
Ukuze lezi zifo zihlanganisa isifo Cushing sika, ukufiphala kwamehlo decompensated ngifundise ngesifo sikashukela, acute igciwane lohlobo, ezinzima umfutho wegazi ophakeme emithanjeni, ospeoporoz, peptic isilonda isifo, isifo sofuba asebenzayo, mycosis letindzala. Futhi, izidakamizwa is contraindicated isicelo uma isiguli izifo ezibangelwa amagciwane kanye ezibangelwa amagciwane esweni, izifo corneal lapho lilimele epithelium. Awukwazi ukusebenzisa lolu ukhilimu, futhi webhaktheriya, fungal, izilonda viral kwesikhumba, isifo sofuba, ugcunsula, izimila isikhumba nokukhulelwa.
Ukusebenzisa izidakamizwa "prednisolone" ngefomu ithebhulethi noma ngesimo yokugcoba kanye imijovo kungase ngokulandelana kubangele ukubukeka izilonda erosive-ulcerous we mucosa esiswini, isifo sikashukela, ukukhumuzeka kwamathambo, umfutho wegazi ophakeme, sengqondo, Syndrome Cushing, tachycardia, ubuthakathaka, hypokalemia. Futhi nesenzakalo okungenzeka nokugcinwa uketshezi, esingamahlalakhona adrenal ukuthi izimpawu zokuqaleka, nokuncipha izicubu ukukhanda izinqubo, kwamasosha omzimba, ukwehla yemisipha, exacerbation lesi sifo ecashile ime emva isicelo zomuthi.
Umuthi 'prednisolone wamafutha "- nokushintsha kokudla nokufakwa nokuPhatha
Phakathi ukwelashwa kudingeka bahlale ibe ngaphansi ukunakekelwa kadokotela, ukulawula uketshezi electrolyte ibhalansi, isimo wegazi, amazinga kashukela yi-plasma, kuhlanganise ukuqhuba cwaningo njalo wegazi neuropathy.
"Prednisolone wamafutha" lisetshenzisiwe isikhumba ethintekile izikhathi 1-3 ngesikhathi isikhathi imini imithi oyinikiwe kumele singeqi amasonto amabili.
kubalulekile ukuba amise yokwamukela Ama-anabolic steroid futhi eyayenziwe ukwandisa i-potassium ukunciphisa ingozi engadingeki side effects. Uma isiguli isifo Addison sika, akunakwenzeka yokunika ukusetshenziswa ngesikhathi esisodwa barbiturates. Ephambi kwezinduna sofuba kanye nezifo ze-non-eqondile, ukusetshenziswa prednisolone kufanele baqaphe futhi emva Inkambo yokwelashwa Kunconywa nokuphathwa ACTH.
Wamafutha "Prednisolone" - Izibuyekezo
Enye yezinkinga eziyinhloko ukuthi kuphakama emva izidakamizwa "Prednisolone", iziguli eziningi ngokuthi inani elikhulu amathuba okuba nemiphumela engemihle. Abanye abantu abangajabule ukuthi Wengeze isisindo, abanye uqaphele ukubukeka iziyaluyalu ohlelweni hormone. Futhi, eziningi esekhala isimo sokucindezeleka futhi kabuhlungu.
Khetha Analogue "aspirin Cardio"